Follower Rate ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့် Social Media Post Type များ -
Social Media ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေဆိုရင် Follower တွေသူထက်ငါ့ အပြိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ Follower သစ်တွေ ရောက်လာဖို့ထက်လက်ရှိမှာ ရှိနေတဲ့ Organic Follower တွေ လျော့မသွားဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ Organic Follower ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ Social Media Page/Channel တွေကို Promotion, Boosting အစရှိတဲ့ Investment လုပ်ထားပြီး ရရှိထားတဲ့ Follower မဟုတ်ပဲ အမှန်တကယ်ပဲ မိမိ Social Media Page/Channel ကို Follow လုပ်ထားတဲ့ Follower တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို Organic Follower တွေရှိနေမှာ သာသင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို၊ Follower တွေဆီ်မှ တဆင့်ကြားပြီး ရောက်ရရှိလာမယ့် Follower တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Organic Follower တွေလျော့မသွားအောင် ထိန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Follower တွေကိုထိန်းထားဖို့
ဆိုရင်တော့ သင့် Social Media Page/Channel မှာတင်တဲ့ Content Schedule, Content-Type, Post Type တွေကလည်း အရမ်းကို စကားပြောတဲ့ ကဏ္ဍ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့် Social Media Page/Channel တွေမှာရှိတဲ့ Follower Rate ကို ထိမ်းသိန်းထားနိုင်မယ့် အချက်တွေကို အောက်ပါ Infographic မှာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 13, 2019/ Blog/0Comment
Video Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာနေသူတစ်ယောက်လား?
US တွင် QR Code များကို Funds Transfer ပေးသည့် Tools ပုံစံအသစ်တစ်ခုအဖြစ် Facebook စမ်းသပ်နေ
2 Billion ကျော် Download ရှိသွားတဲ့ TikTok
Media Planning တစ်ခု ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ?
Internet မလိုပဲ Offline အသုံးပြုနိုင်မဲ့ Messaging App များ